Solari oo si adag kaga jawaab celiyay weerarkii uu kala kulmay Francisco Isco – Gool FM
(Real Madrid) 08 Feb 2019. Macalinka kooxda Real Madrid ee Santiago Solari ayaa go’aansaday hadaladii weerarka ahaa uu kala kulmay laacibka reer Spain ee Francisco Isco dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay,
Francisco Isco ayaa muujiyay sida adag uu kaga xun yahay nolosha uu haatan kaga sugan yahay kooxda Real Madrid.
Hadalka tababare Santiago Solari ayaa wuxuu yimid kadib markii uu kasoo hor muuqday shirka jaraa’id ee ka horeeya kulanka adag ay kula ciyaari doonaan kooxda Atletico Madrid horyaalka La Liga, kaasoo ka tirsan kulamada 23-aad.
Isco ayaan si toos ah kaga soo muuqan safka Real Madrid tan iyo markii uu kooxda yimid tababare Santiago Solari, taasoo muujineysa hoos u dhaca ku yimid laacibkan tayo ahaan iyo jir ahaanba, wuxuuna si toos ah daris ula noqday kursiga keydka.
Hadaba tababare Solari oo ka jawaab celinayay hadaladii weerarka ahaa uu kala kulmay laacibka reer Spain ee Francisco Isco ayaa wuxuu yiri:
“Ciyaaryahanka xirfadlaha ah waa inuu tababar sameeyaa si awoodiisa ay mar walba u noqoto mid dhameystiran, isla markaana uu ugu adeego kooxdiisa”.
“Waa inuu ogaadaa in Real Madrid aysan cidna sugeynin”.
Intaas kadib Santiago Solari ayaa wuxuu ka hadlay xaalada kooxdiisa Real Madrid kahor kulanka soo aadan ay la ciyaari doonaan Atletico Madrid.
“Ciyaartoyda waa kuwo aad u fiican, waa arin wanaagsan in aan aragno ciyaartoydan, kaliya ma ahan kulamada ay ciyaarayaan ee sidoo kale tababarka ay sameenayaan”.
“Waxaan shaqeeneynaa maalin kasta, si aan u xoojino awoodda jireed iyo xeeladeed kahor kulan kasta”.
SHEEKO CAJIIB AH: Daafaca Juventus Medhi Benatia oo DIINTIISA ISLAAMKA darteed u diiday inuu ku biiro Man United iyo Arsenal isagoona....!!!
“Ma jiro wax ka muhiimsan ku guuleysiga horyaalka Premier League” - Klopp